Nwere ike ime "Ihe ngosi mmịfe" ma ọ bụ ihe ngosi mmịfe na Foto | Gam akporosis
Foto Google na-enye gị ohere igosi foto gị na ihe ngosi mmịfe
Izu a anyị mụtara n’aka Apple na n’ime ngwa foto ha, ha etinyela ọnụ ọgụgụ ka ukwuu atụmatụ anyị nwere na Foto Google ogologo oge. Ihu ihu, nhọrọ iji mepụta ihe nkiri na-akpaghị aka ma ọ bụ nhazi site na folda dịka o si amata ihe ndị dị na onyonyo ahụ, bụ ọrụ ndị gosipụtara ngwa a na nke edozigharị ndị nke Cupertino.
Ugbu a bụ mgbe Google Foto webatara otu n'ime atụmatụ ndị ahụ enwere ike ịgụnye kpamkpam kemgbe ebuputara ya nke kachasị mma ọrụ foto dị taa. Nke a bụ ihe ngosi mmịfe ma ọ bụ «Slideshows» ọ ga - enyere gị aka mụta nwa ha n'ụzọ pụrụ iche ndị niile ị nwere na ọba egwu. Yabụ ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ mgbe anyị chọrọ igosi foto ndị ahụ niile anyị ga-ezumike na Smart TV ma ọ bụ kọmputa.
Iji nweta atụmatụ a na Foto Google, anyị nwere ike ịnweta ọba ọ bụla, pịa na foto na anyị họrọ «Ihe ngosi mmịfe» site na mmapụta menu. Enwere ike iji ọrụ a rụọ ọrụ nke ukwuu ma ọ bụrụ na anyị amalite taabụ Chrome na TV ka anyị na-anọdụ ala nke ọma na sofa ma gosi ezinụlọ ahụ dum foto ndị anyị were igwefoto nke ama anyị.
Slideshows dị ma na weebụ ma n'ime android mbipute. Google ekwutabeghị na atụmatụ a ga-apụ na ndị ọrụ iOS. Arụ ọrụ ọhụrụ na-agbakwunye ọtụtụ ndị ọzọ nke Google Photos natara, dị ka ike gbanwee ụbọchị na oge nke ọtụtụ foto site na weebụ, mee a akwụkwọ ntuziaka na nkwado ndabere na mpaghara nke foto gị ma ọ bụ ihe ha bụ ọnwa atọ gara aga smart albums.
Mmelite kwesiri ibu imetụ Play Store ugbu a na ngwaọrụ gam akporo gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Foto Google na-enye gị ohere igosi foto gị na ihe ngosi mmịfe
Mara ọkwa Bluetooth 5 na ugboro abụọ na-agba, ugboro anọ mkpuchi na 800% ọzọ ikike
LG weputara uzo ohuru nke LG X n’etiti